मौलिक - Best of Japan
फोटोहरू: जापानमा आँधी वा भूकम्पको अवस्थामा के गर्ने
धेरै टाइफुनहरूले हरेक वर्ष जुलाईदेखि अक्टुबरको शुरूतिर जापानमा प्रहार गर्दछ। अन्य मौसमहरूमा पनि, तपाईंले भूकम्प, भारी वर्षा, वा भारी हिउँको सामना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि जापानमा यस्तो प्राकृतिक प्रकोप आयो भने निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईंसँग कुनै समस्या छ भने, कृपया आसपासका जापानी मानिसहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस्। हामी अंग्रेजीमा राम्रो छैनौं, त्यसैले हामी सकारात्मक बोल्दैनौं। तर यदि तपाईं समस्यामा हुनुहुन्छ, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न चाहन्छौं। हामी जापानी सरकारी अनुप्रयोग "सुरक्षा सल्लाहहरू" डाउनलोड गर्न सिफारिस गर्दछौं। कृपया यसलाई तपाईको वरपरका मानिसहरु माझ साझेदारी गर्नुहोस् जो जापान जान सक्दछन्। यदि तपाईंसँग कुनै समस्या छ भने, कृपया नजीकको साथ जापानी व्यक्तिको सम्पर्क गर्नुहोस्। खराब मौसममा जापानका फोटोहरू खराब मौसममा जापानी परिदृश्य = एडोबस्टक खराब मौसममा जापानी परिदृश्य = पिक्सटा खराब मौसममा जापानी परिदृश्य = खराब मौसममा शटरस्टक जापानी परिदृश्य = खराब मौसममा एडोबस्टक जापानी परिदृश्य = एडोबस्टक म तपाईंलाई अन्तमा पढ्ने सराहना गर्छु। "निकासी" मा फर्कनुहोस्
जापान मा यात्रा गर्नु भन्दा पहिले जान्नको लागि जानकारीको 11 आधारभूत टुक्राहरू
सबै भन्दा पहिले, म जापान मा यात्रा को लागी केहि आधारभूत परिचय गर्न चाहान्छु। निम्न पृष्ठहरूमा संक्षिप्त जानकारी समावेश छ जुन तपाईं आफ्नो यात्रा अघि जान्न चाहानुहुन्छ। यसमा जापानी समय क्षेत्र, पैसा, मौसम, प्राकृतिक प्रकोप, वार्षिक घटनाहरू, सिम कार्डहरू र जापानी भाषा सम्बन्धी जानकारी समावेश छ। थपको रूपमा, यी विषयहरूलाई थप विस्तृत रूपमा सम्बोधन गर्न मैले पूरक वेबसाइटहरू तयार गरेको छु। यदि तपाईंसँग समय छ भने, यिनीहरू पनि पढ्नुहोस्। के तपाईलाई जापानी भाषा, मुद्रा इत्यादि बारे थाहा छ? जापान मा सबै भन्दा राम्रो मौसम कहिले हो? जापानी भाषा अवरोध पार गर्न गोप्य रणनीति के हो? जापानी मुद्रा कसरी प्रयोग र आदानप्रदान गर्ने जापानमा सिम कार्ड वा पकेट वाइ-फाइ कसरी प्रयोग गर्ने जापानमा अहिले कति बज्यो? के तपाईंलाई जापानी सम्राट र राष्ट्रिय झण्डाको बारे थाहा छ? जापानको छुट्टिको बारेमा जानौं जापानमा वार्षिक घटनाहरू जान्न रमाईलो छ! जापानको मौसम र मौसम मौसम अनुसार फरक फरक पर्दछ हामी प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै भूकम्पको बारेमा जान्न सिफारिश गर्छौं जापानी सम्बन्धी सम्बन्धित साइटहरू अंग्रेजीमा म तपाईंलाई अन्तसम्म पढ्ने सराहना गर्छु। मेरो बारेमा घर फिर्ता बोन कुरोसवा मैले लामो लामो निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) का लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यस पृष्ठमा, म रेस्टुराँ सम्बन्धित साइटहरू सहित धेरै शैलीहरूको साइटहरू परिचय गर्दछु। तलको लिंक उपयोगी छ जब तपाईं जापानी चाडहरू र आकर्षणहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, जब तपाईं जापानी समाचार र मौसम पूर्वानुमान जान्न चाहानुहुन्छ, र तपाईं जापानी उपसंस्कृतिमा रुचि राख्नुहुन्छ भने पनि। कृपया यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। रेस्टुरेन्ट सम्बन्धित साइट GURUNAVI GURUNAVI जापान मा अग्रणी रेस्टुरेन्ट गाइड साइट हो। यसमा व्यक्तिगत रेष्टुरेन्टहरू र इजाकाया (जापानी शैलीको पब) आदि बारे विस्तृत जानकारी छ। >> GURUNAVI को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ HET PEPER HOT PEPER एक लोकप्रिय रेस्टुरेन्ट गाइड साइट माथिको GURUNAVI को साथ हो। यसमा व्यक्तिगत रेष्टुरेन्टहरू र इजाकाया (जापानी शैली पबहरू आदि) बारे विस्तृत जानकारी पनि छ। >> HOT PEPPER को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ favy favy पनि जापानी रेस्टुरेन्ट परिचय गर्ने साइट हो। यद्यपि यो माथिको गुरूनावी र हट पेपर जत्तिकै प्रमुख छैन, यो त्यस्तो साइट हो जसले विदेशी पर्यटकहरूलाई बुझ्न सजिलो बनाउँदछ। >> favy को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ शेट गेट जापानी खाना संस्कृति को बारे मा जान्न चाहनेहरु को लागी, म निम्न साइट सिफारिस गर्दछु। शन गेटले जापानको क्षेत्रमा स्वादिष्ट खानाको बारेमा प्रस्तुत गर्दैछ। यो साइट धेरै चाखलाग्दो छ। >> शन गेटको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ फेस्टिवल र आकर्षण जानकारी साइट छ जापान आकर्षण जापान आकर्षणहरु उत्सव र रोशनी जस्ता जापानी घटनाहरुमा अप-टु-डेट जानकारी प्रदान गर्दछ। जब तपाईं जापान जानुहुन्छ, कृपया यस साइटमा जानकारी स collect्कलन गर्नुहोस्, कुन कार्यक्रम जापानको विभिन्न भागमा आयोजित हुनेछ। ...
यदि तपाईंले जापान जाने निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईं राम्रो रूपमा एयरलाइनहरू र रेलवे (विशेष गरी जापान रेल पास) बारेमा, बसहरू, ट्याक्सीहरू, आदि, साथै होटलहरू सम्बन्धित साइटहरूमा जानकारी एकत्रित गर्नुहुन्छ। कृपया मलाई यो पृष्ठमा यी महत्वपूर्ण वेबसाइटहरू परिचय गर्न दिनुहोस्। यातायात सम्बन्धित साइटहरू जानकारी साइटहरू "HyperDia" HyperDia एक धेरै प्रोत्साहनजनक साइट हो जब तपाईं जापानमा मार्गहरू खोजी गर्नुहुन्छ। यसले स्मार्टफोनलाई समर्थन गर्दछ। कृपया यो साइटको भ्रमण गर्नुहोस् र यसको लागि खोजी गर्नुहोस्। >> हाइपरडिआको आधिकारिक साइट यहाँ छ एयरलाइन्स पारम्परिक पूर्ण सेवा वाहक (FSC) JAL JAL (जापान एयरलाइन्स) जापानको अग्रणी एयरलाइन हो जुन एएएन मुनि तल छ। यसले सम्पूर्ण जापान भर नियमित उडानहरू संचालन गर्दछ। >> JAL को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ एएनए एएनए (सबै निप्पन एयरवेज) जापानको जालको अग्रणी एयरलाइन हो JAL को साथ। जापानको एयरपोर्टहरूमा, नियमित उडानहरू या त JAL वा एएनए द्वारा संचालित भइरहेको छ। >> एएनएको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ स्टार फ्लायर स्टार फ्लायर एक एयरलाइन हो जुन फुकुओका प्रान्त, क्युशुमा कताक्युशु एयरपोर्टमा स्थित छ। स्टार फ्लायर भाडा अपेक्षाकृत सस्तो छ, तर यो LCC होइन। सेना स्टार फ्लायरमा पूंजी सहभागी हो। >> स्टार फ्लायर सोलिसेड एयरको आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् सोलसेड एयर एक एयरलाइन कम्पनी हो जुन मुख्यालय मियाजाकी प्रान्त, कुशुमा रहेको छ। सोलसेड एयर भाडा पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ, तर यो LCC होइन। एएनएको सोलसीड एयरमा पूँजी सहभागिता छ। >> सोलसीड एयरको आधिकारिक वेबसाइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् कम लागत वाहक (LCC) Jetstar जापान Jetstar जापान जापान को सब भन्दा ठूलो कम लागत वाहक (LCC) हो। अष्ट्रेलियाको क्वान्टस एयरलाइन्स, जापान एयरलाइन्स, आदि का पूंजीगत सहभागिता छ। >> को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ...
जब तपाईं जापानमा कुन होटल बस्नुपर्नेछ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं तल "TripAdvisor" प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाइँ कुन होटल बस्न चाहानुहुन्छ भन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, "सस्तो आरक्षण" को सट्टा "सस्तो आरक्षण साइट" खोजौं। मैले व्यक्तिगत सिफारिश गरिएको आरक्षण साइटहरू पनि सूचीबद्ध गरें। वास्तवमा, मैले निम्न लेखहरूमा यी साइटहरू परिचय गर्‍यो। त्यसैले विवरणको लागि तलको लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा नक्कल हटाउन, म केवल डाटा गणना गर्दछु। तुलना साइटहरू TripAdvisor TripAdvisor TripAdvisor धेरै उपयोगी छ जब तपाईं जापान मा एक होटल को लागी। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, TripAdvisor को आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठ मा प्रदर्शित हुनेछ। ट्राभेलको ट्राभेलको ट्राभेलको जापानमा यति धेरै होटल आरक्षण साइटहरू बीचको सस्तो आवास योजना फेला पार्नेछ। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, ट्राभेलकोको आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ। होटल आरक्षण साइटहरू Rakuten यात्रा Rakuten यात्रा Rakuten यात्रा र निम्न Jalan.net सबै भन्दा जापानी होटेल कभर। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, Rakuten यात्रा को आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठ मा प्रदर्शित हुनेछ। Jalan.net jalan.net Jalan.net राकुटेन ट्राभलको सब भन्दा बलियो प्रतिद्वन्द्वी हो। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, Jalan.net को आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ। जापानिकान जापानिकान जापानिकान जापानको सबैभन्दा ठूलो ट्राभल एजेन्सी जेटीबी द्वारा संचालित एक वेबसाइट हो। माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्, जापानिको आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ। म तपाईंलाई अन्त मा पढ्न कदर गर्छु। "सिफारिस गरिएका साइटहरू" मा फिर्ता जानुहोस् मेरो बारेमा बोन ...
अब, अधिक र अधिक परिचय दिनुहोस्! t अर्को Chubu क्षेत्र (माउन्ट फुजी आदि) र Kansai क्षेत्र (त्यहाँ क्योटो, नारा, ओसाका आदि छन्!) सम्बन्धित साइटहरू छन्। कृपया प्रत्येक साइटमा अधिक जानकारी खोज्नुहोस्। Chubu क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट MT। फुजी त्यहाँ एमटीका लागि तीन सिफारिश साइटहरू छन्। निम्नानुसार फुजी सबैभन्दा पहिले, यदि तपाईं माउन्टको शिखरमा चढ्न चाहनुहुन्छ भने। गर्मीमा फुजी, कृपया पहिले आधिकारिक वेबसाइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। अर्को, सामान्य पर्यटन को लागी, म दोस्रो साइट को सिफारिश। यो माउन्टको उत्तर तिर यमनाशी प्रान्तको आधिकारिक साइट हो। फुजी मलाई लाग्छ कि माउन्ट। फुजी उत्तरमा अहिले सबैभन्दा सुन्दर छ। वास्तवमा धेरै पर्यटकहरू उत्तरतर्फ जान्छन् जस्तै कावागुचिको। यदि तपाइँ माउन्टमा पुग्नुभयो भने दक्षिणबाट फुजी, कृपया शिजुओका प्रान्तको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, जुन मैले तल तेर्सो सूचीबद्ध गरें। >> माउन्ट फुजी आरोहणका लागि कृपया यस साइटलाई हेर्नुहोस् >> माउन्ट फुजीको उत्तरी तर्फ जानकारीका लागि कृपया यस साइटमा जानुहोस् >> माउन्ट फुजीको दक्षिणपट्टि जानकारीका लागि कृपया यस साइट नागोनो भ्रमण गर्नुहोस्। नागानो प्रान्तमा स्पटहरू जस्तै हाकुबा र मत्सुमोोटो, कृपया निम्न वेबसाइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। यो नागोनो प्रान्तको पर्यटन विभागको साइट हो। >> नागानो प्रान्तमा पर्यटक सूचनाका लागि कृपया यो साइट हेर्नुहोस् काजजा समुद्री किनारको इशिकवा प्रान्तको कानाजावा कानाजावा शहर, पारम्परिक शहरस्केप र संस्कृति छोडियो जहाँ अद्भुत शहर। कनाजावाको सन्दर्भमा, म निम्न अधिकारीलाई सिफारिस गर्दछु ...
पछि पश्चिमी जापानको सम्बन्धित साइटहरू छन्। यदि तपाईं हिरोशिमा, फुकुओका, ओकिनावा, आदि जाने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, निम्न साइटहरूले हामीलाई उपयोगी जानकारी बताउँदछन्। चुगोको र शिकोको क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट हिरोशिमा हिरोशिमा प्रान्तको पर्यटन स्थलहरू जस्तै मियाजीमा टापु र हिरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालयको सन्दर्भमा, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि "VISIT HIROSHIMA" पर्यटन कार्यालय द्वारा संचालित हिरोशिमा प्रान्तमा। >> हिरोशिमा भ्रमण गर्नुहोस् सेतोची होन्शु र शिकोको बीचमा सेतो आन्तरिक समुद्री शान्त छालहरू भएको समुद्र हो। यो सानो टापुको साथ बिन्दु भएको छ र सुन्दर दृश्यहरू सिर्जना गर्दछ। सेटो इनल्यान्ड सागर र वरपरका क्षेत्रहरूलाई सामूहिक रूपमा "सेतोची" भनिएको छ। सेतोची को लागी, "सेतोची खोजक" ले जानकारीलाई विस्तृत रूपमा पोष्ट गर्छ। यो सेतोची पर्यटन प्राधिकरण, सेतुची (ह्योगो, ओकायामा, हीरोशिमा, यामागुची, टोकुशिमा, कागवा र एहिमेम) को सात प्रान्तहरू बीचको सहकार्यको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिएको छ। >> सेतुची फाइन्डर यहाँ छ सान'इन चुगोकु क्षेत्रको उत्तरी भाग (पश्चिम होन्शुको जापानको सागर) सामूहिक रूपमा सान'इन वा सानिन भनेर चिनिन्छ। यो क्षेत्र Chugoku पहाड क्षेत्र द्वारा हिरोशिमा रूपमा दक्षिण मा प्रमुख शहरहरु बाट अलग छ। त्यसोभए, सान'इन क्षेत्र २० औं शताब्दीको पछि विकासको तुलनामा ढिलाइ भएको छ। त्यस कारणका लागि, एक आश्चर्यजनक सुन्दर पारम्परिक विश्व बाँकी छ। सान'इनको सम्बन्धमा, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु यस क्षेत्रमा नगरपालिका द्वारा सञ्चालित "डिसेभर सान'इन"। >> Discaver San'in यहाँ कुशु क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट कियुशु क्युशुमा पर्यटन सम्बन्धी जानकारीको बारेमा सिफारिश गर्दछु, तपाईले "ओन्सेन टापु KYUSHU" भ्रमण गर्नुहोस्। यो साइट द्वारा व्यवस्थित गरिएको छ ...
अर्को, म जापानमा स्थानीय दर्शनीय स्थलहरू पुर्‍याउने धेरै वेबसाइटहरू परिचय दिनेछु। म तिनीहरूलाई जापानको उत्तर तर्फबाट क्रममा परिचय दिनेछु। यदि तपाईं यी वेबसाइटहरू भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईं जापानको प्रत्येक क्षेत्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, अन्तमा, कृपया मेरो वेबसाइटमा फिर्ता आउनुहोस्! होक्काइडो सम्बन्धित वेबसाइट सप्पोरो टुरिस्ट एसोसियसन सप्पोरो टुरिस्ट एसोसियसन सप्पोरोमा एक पर्यटन सम्बन्धित संगठन हो। यसले जापान र दुबै पर्यटकहरूका लागि सप्पोरोको दर्शनीय जानकारी प्रदान गर्दछ। >> सप्पोरो टुरिस्ट एसोसिएशनको आधिकारिक साइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हकोडाट सिटी हकोडाट सिटीले तल र आधिकारिक वेबसाइटमा दुवै देश र विदेशमा पर्यटकहरूको लागि भ्रमण को जानकारी प्रदान गर्दैछ। >> हाकोडाट सिटी Biei टाउन Biei शहर को आधिकारिक वेबसाइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यसको सुन्दर फूल बगैंचा लागि प्रसिद्ध, आधिकारिक वेबसाइट मा पर्यटक जानकारी प्रदान गर्दछ। >> Biei टाउन को दक्षिण मा स्थित Furano टाउन Furano टाउन को आधिकारिक साइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् आधिकारिक वेबसाइट मा दर्शनीय जानकारी प्रदान गर्दछ। >> फुरानो टाउन Shiretoko Shari-cho पर्यटक संघ Shiretoko Shari-cho पर्यटक संघ को आधिकारिक वेबसाइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् पूर्वी Hokkaido मा प्रसिद्ध पर्यटन गन्तव्य Shiretoko को बारे मा विस्तृत पर्यटन जानकारी प्रदान गर्दछ। >> Shiretoko Shari-cho पर्यटक संघ Tohoku क्षेत्र सम्बन्धित वेबसाइट Sanriku रेलवे Sanriku रेलवे को आधिकारिक वेबसाइट को लागी क्लिक गर्नुहोस् Tohoku क्षेत्र को प्रशान्त तट को उत्तर र दक्षिण। यो क्षेत्र २०११ को ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पले ध्वस्त पारेको थियो। यद्यपि त्यसपश्चात धेरै व्यक्तिको प्रयासले सान्रिकु रेलवे पुनर्स्थापित भयो। यो रेलवे अब प्रसिद्ध छ ...